Degso Tools Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Degso Tools Barnaamijyada
Download Nadiifi Master Master Master waa nadiifiye kumbuyuutar bilaash ah oo xoojiya. Master Master waa barnaamij Windows ah oo leh astaamo waawayn sida tirtirka faylasha aan loo baahnayn (qashinka), xawaaraha kombiyuutarka, nadiifiyaha asturnaanta, soo kabashada faylka, cusbooneysiinta otomaatiga, auto nadiifinta faylasha, tirtir...
IObit Uninstaller waa fure-bixiye aad isticmaali karto adiga oo aan u baahnayn lambar liisanka. Waxay ka mid tahay aaladaha bilaashka ah ee isticmaaleyaasha Windows PC ay u adeegsan karaan inay ku qabtaan dayactirka kombiyuutarka iyo barnaamijyada tirtirka oo aad uga fudud uguna dhaqso badan. Windows 10 waxaa loo isticmaalaa in lagu...
Diiwaanka Finder waa barnaamij diiwaangelin oo bilaash ah, fudud oo waxtar leh oo loo diyaariyay faaiidada isticmaalayaasha kombiyuutarka. Barnaamijkan, oo ku shaqeeya nidaamka hawlgalka Windows, wuxuu ku siinayaa fursad aad si fudud ugu hesho waxa aad ka raadinayso diiwaanka, oo aad u dhib badan. Laakiin waxa ka sii fiican ayaa ah in...
DirectX waa qaybo ka mid ah nidaamka hawlgalka Windows kaas oo u oggolaanaya barnaamijka ugu horreyn iyo gaar ahaan cayaaraha inay si toos ah ula shaqeeyaan fiidiyowgaaga iyo qalabka maqalka. Ciyaaraha u adeegsada DirectX si hufan waxay u adeegsadaan astaamaha dardar-geliyaha multimedia ee lagu dhisay qalabkaaga, kaas oo sare u qaadaya...
VLC Media Player, oo badanaa loo yaqaan VLC isticmaalayaasha kombiyuutarka, waa ciyaariyahan warbaahin oo bilaash ah oo loogu talagalay inaad ku ciyaarto dhammaan noocyada feylasha warbaahinta kombiyuutaradaada dhibaato laaan. Soo Degso VLC Player - Free Media Player Taageerida ku dhowaad dhammaan kordhinta feylasha ee fiidiyowga iyo...
Bandizip wuxuu u taagan yahay barnaamij aad u dhakhso badan, iftiin iyo bilaash ah oo aad u adeegsan karto bedel ahaan barnaamijyada isku-darka faylasha ee caanka ah Winrar, Winzip iyo 7zip ee suuqa. Bixinta taageerada dhammaan qaababka riixitaanka caanka ah ee ku saabsan tartamayaasha lacagta la siiyay iyo waxyaabo kale oo badan,...
Maanta, Winrar waa barnaamijka ugu dhammaystiran oo leh astaamaha ugu wanaagsan ee ka mid ah barnaamijyada culeyska faylka. Barnaamijka, oo taageera qaabab badan oo fayl ah, ayaa ku soo jiidanaysa rakibidda iyo adeegsiga fudud. Nooca Windows ee Winrar, oo si buuxda u taageera qaababka ZIP iyo RAR oo bixiya taageero buuxda kaydinta, waa...
Rufus waa barnaamij yar oo fudud oo la isticmaali karo oo bilaash ah oo kaa caawinaya inaad sameysid saxanno USB-ga la kaban karo ah. Badanaa waad u baahan kartaa haddii: Waad qaabeysay kumbuyuutarkaaga waxaadna ku rakibi doontaa nidaamkaaga qalliinka adoo adeegsanaya xusuusta USB-ga adiga oo kaashanaya feyl sawir leh oo ISO ah....
Way fududahay in la tirtiro faylasha iyo fayllada aan lagu tirtiri karin Unlocker! Markaad isku daydo inaad tirtirto feyl ama galka kumbuyuutarkaaga Windows, Ficilkan lama sameyn karo maxaa yeelay galka ama feylku wuxuu ku furan yahay barnaamij kale. Xir faylka oo markale isku day iwm. Barnaamij aad u adeegsan karto hagaajinta qaladka...
Recuva waa barnaamij soo kabasho fayl oo bilaash ah kana mid ah caawiyayaasha ugu weyn ee adeegsadayaasha soo celinta faylasha tirtiray kombiyuutarkaaga. Beddel wanaagsan oo dhammaystiran, waxaad isla markiiba isku dayi kartaa EaseUS Data Recovery. Wizard Data Recovery Wizard, oo hawada ku jiray 17 sano, wuxuu si buuxda u qabtaa...
IObit Unlocker waa barnaamij yar oo faaiido leh oo kuu ogolaanaya inaad tirtirto faylashaada iyo fayl aad isku dayday inaad tirtirto laakiin aad ku adkeysato in aan la tirtirin Barnaamijka tirtiraya fariimaha qaladka ah Lama tirtiri karo feylka, Helitaan La Diiday, Faylkan waxaa lagu isticmaalaa barnaamij kale waa - habka ay u shaqeyso -...
7-Zip waa barnaamij bilaash ah oo awood badan oo adeegsadayaasha kumbuyuutarradu ay ku cadaadin karaan faylasha iyo faylalka ku jira qaddiyaddooda adag ama ay hoos u dhigi karaan faylasha. In kasta oo ay jiraan barnaamijyo badan oo faylasha lagu riixo oo suuqa ku jira, 7-Zip ayaa ah dookha koowaad ee adeegsadayaal badan sababtuna tahay...
Barnaamijka HWiNFO64 waa barnaamij macluumaad nidaam oo kuu oggolaanaya inaad hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalabka kombiyuutarkaaga ku jira, waana barnaamij aad u deeqsi ah marka la eego faahfaahinta uu ku siiyo. Sababtoo ah HWiNFO64, oo tusaya ku dhawaad ​​dhammaan faahfaahinta dhinaca qalabka ee nidaamkaaga, waxaad yeelan...
Disk -ka Qarsoon waa barnaamij abuurista diskiga dalwaddii ah oo aad u adeegsan karto isticmaale ahaan Windows PC si aad u qariso faylasha iyo faylka. Waxaad fursad u haysataa inaad ku kaydiso faylashaada iyo faylladaada oo aadan rabin in qof kale arko, oo ku jira diskka sirta ah ee sirta ah. Ku dhawaad ​​isticmaale kasta oo Windows ah...
EaseUS Partition Master Free waa barnaamij bilaash ah oo Windows ah oo u oggolaanaya kala-goynta, nadiifinta, kala-goynta, cloning, qaabeynta HDD-yada, SSD-yada, USB-yada, kaararka xusuusta iyo aaladaha kale ee laga saari karo. Iyada oo la adeegsanayo EaseUS Partition Master Free, oo ah barnaamij qaybinta diskiga ah oo bixiya adeegsi...
Mararka qaarkood waxaad si qaldan u tirtiri kartaa faylasha muhiimka u ah shaqadaada, qoyskaaga, ama adiga. Haddii aan la kulanno wax sidan oo kale ah annagoo ka shaqeyneyna meel kasta oo ka mid ah daaqadaha, waa hagaag, ka dib oo dhan, waxaan fursad u leenahay inaan ka soo kabanno xogta la tirtiray illaa aan ka faaruqinno qashinka,...
Cemu - Emulator Wii U waa barnaamij emulator ah oo aad isticmaali karto haddii aad rabto inaad ku socodsiiso ciyaaraha Wii U kombiyuutarkaaga. Emulatorkan Wii U, oo aad kala soo bixi karto isla markaana aad u isticmaali karto gabi ahaanba bilaash, wuxuu ku maamuli karaa kulamadaada Wii U kombiyuutarkaaga adiga oo ka faaiideysanaya...
Barnaamij yar oo hadana awood badan, WinUSB wuxuu kuu ogolaanayaa inaad diyaarsato USB-yada la qaadan karo. Iyadoo la adeegsanayo WinUSB, oo kaa caawineysa inaad sameysid xusuusta qaabka Windows, shaqadaada waa lagu fududeyn karaa. Haysashada isdhexgal aad u fudud oo si sahlan loo isticmaali karo, WinUSB waa barnaamij awood badan oo aad...
SuperRam waa aalad hagaajin xirfadeed oo aad la socon karto oo maamuli karto xusuusta (RAM) kombiyuutarkaaga. Barnaamijkan, oo aad si sahal ah ugu samayn karto dhammaan isku -hagaajinta oo leh interface fudud oo fudud oo xitaa ilmuhu isticmaali karo isagoo aan wax ka beddel ku samaynin qalabkaaga, wuxuu bixiyaa waxqabad ka wanaagsan...
CPUCores :: Kordhi FPS -gaagu waa barnaamij dardargelinta ciyaarta oo xallin kara dhibaatadaada haddii kombiyuutarkaagu ku socdo ciyaaro waxqabad hooseeya oo leh tayo garaafyo sare. CPUCores :: Kordhi FPS -gaaga, oo ah xoojin wax -qabad ciyaarta oo ku socota Steam, asal ahaan waxay xakameysaa sida nidaamkaaga hawlgalka ee Windows iyo...
EaseUS System GoBack Free waa barnaamij gurmad nidaam bilaash ah oo aad u isticmaali karto inaad beddesho oo aad ku soo celiso nuqulka nidaamkaaga hawlgalka Windows. Barnaamijka, kaas oo u saamaxaya adeegsadayaasha aan ku qanacsanayn inay si fudud ugu laabtaan Windows 8 ama 7 ka dib markii la rakibay Windows 10 cusub, wuxuu ku kaydin...
Ku wareejinta farriimaha WhatsApp ee ka socda Android illaa iPhone ma aha sida aad u maleyneyso inay adag tahay! Haddii aad raadineyso barnaamij deg deg ah, fudud, dhib-laaan ah oo lagu kalsoonaan karo si aad ugu gudbiso farriimahaaga WhatsApp iyo sheekaysiga taleefanka Android illaa iPhone, waxaan kugula talinayaa Backuptrans Android...
Barnaamijka Dayactirka Dijital ah ee Fidiyowga ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dayactirto fiidiyowgaaga fiidiyow ee waxyeello ku soo gaadhay dhowr qasabno. Markaad ka soo kabato fiidiyow qalab qalad ah ama aad ka soo kabato fiidiyow la tirtiray, runti waxay noqon kartaa wax laga xumaado oo laga xumaado in la arko in faylka la...
CPUBalance waa software yar oo wax ku ool ah. Barnaamijka ka horjoogsanaya barnaamijyada ka socda nidaamka qalliinkaaga inay ka shaqeeyaan gadaal waxayna cabbiri karaan waqtiyada falcelinta ee nidaamka oo ku tusayaan, waad ka warqabtaa wax kasta oo ka socda nidaamkaaga. CPUBalance Pro, oo ah softiweer waxtar leh, ayaa lagu qeexi karaa...
Tifaftiraha Qaybta NIUBI wuxuu u taagan yahay barnaamijka ugu dhaqsaha badan uguna aaminka badan qaybta diskiga. Barnaamijka kala-soocida diskiga adag, oo leh qayb-u-beddelid, u-beddelasho qayb, isku-xoqid disk iyo kala-goyn, khaladaadka diskiyada oo la hagaajiyo iyo waxyaabo badan oo dheeri ah, ayaa loo isticmaali karaa kumbuyuutarrada...
NET Qaabdhismeedka 3.5 ayaa ku soo daray astaamo cusub nooca .NET Framework 3.0. Tusaale ahaan, qaababka muuqaalka ee Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF), iyo Windows CardSpace. Intaa waxaa sii dheer, .NET Framework 3.5 waxaa ku jira qaar ka mid ah astaamaha...
IObit SysInfo waa qalab macluumaad oo bilaash ah oo si sahlan loo isticmaali karo. Waxay ku siineysaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee kombiyuutarkaaga, oo ay ku jiraan nidaamka qalliinka, processor-ka, Motherboard-ka, aaladda xusuusta, muuqaalka, darawalada, shabakadda iyo aaladaha kale. Waxay sidoo...
Soocelinta Qeybinta Sixirka waa barnaamij soo celin kara feylasha la tirtiray kana soo kaban kara xogta waxyeelada leh, qaabaysan, musuqmaasuq ah oo aan la geli karin saxannada iyo qalabka keydinta ee qaabka FAT ama NTFS. Haddii aad leedahay disk leh qoruhu tirtiray ama disk adag oo leh qaybo xun, qalabkan soo kabashada ee disk ayaa kaa...
Hamachi waa xalka tiknoolajiyada shabakad faaiido leh oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay aasaasaan shabakado isku dhafan oo ammaan ah oo internetka ah, sidaas darteedna iska dhigaya inay isku mid yihiin isku xirnaanta shabakadda. Markaad barnaamijka socodsiiso markii ugu horreysay kadib markaad kumbuyuutarkaaga ku rakibto, waxay...
CPU-Z waa aalad nidaam lacag laaan ah oo ku siinaysa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan processor-ka kombuyuutarkaaga, Motherboard-ka iyo xusuusta. Soo dejiso CPU-Z Barnaamijku wuxuu ku tusayaa xawaaraha processor-kaaga, xawaaraha saacadaha shaqada ee gudaha iyo dibaddaba, nooca, moodeelka, macluumaadka keydka, soo saaraha, danab...
Markaad isticmaaleyso aaladahaaga macruufka, mararka qaarkood shilal ayaa kugu dhici kara waxaana laga yaabaa inaad lumiso xogtaada muhiimka ah ama tan gaarka ah. Marxaladani waxay marmarka qaarkood sababi kartaa tirtirid shil ah iyo marmarka qaarkood sabab u noqoshada nidaamka oo xumaada. Haddii aad la kulanto xaalad sidan oo kale ah,...